Somaliland: Wasiirka Beeraha Oo Gobollo Kale Ugu Safray Isagoo Ku Taagan Tuutihii Ciidammada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Beeraha Oo Gobollo Kale Ugu Safray Isagoo Ku Taagan Tuutihii...
Wasiirka Beeraha Somaliland Maxamed Aw Daahir, ayaa laba gobol oo kale ugu safray isagoo ku labisan Tuutihii Ciidammadda ee Jimcihii la soo dhaafay lagu naqdiyay markii uu ku tagay Magaaladda Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo dadweynaha magaaladdu ay ku tilmaameen “Tallaabo hanjabaad ahayd”, halka qaar kalena ku sheegeen inay u qaateen “Dhaqan cusub oo ka baxsan nidaamka dawladnimadda.”
Wasiirka Beeruhu waxa uu haddana isagoo ku taagan dirayskii ciidammada ee uu caashaqay uu safar ku tagay Magaalooyinka Boorame iyo Gabiley. Taasina waxay sii xoojisay in bulshaddu si weyn ugu qaadaa-dhigaan goobaha barkulanka bulshadda ficilkan ugubka ah oo ay u arkeen inuu yahay “Mid dhiirigelinaya in xataa dadka shacabka ahi soo tolan karaan dirayska ciidammadda.” Iyadoo aad looga xumaaday direyska ciidamadda ee uu laasimay isagoo aan xataa sooyaalkiisa nololeed marna askari soo noqon.
Wasiirka Beeraha oo shalay soo gaadhay Magaaladda Gabiley ee xarunta gobolka Gabilley, ayaa sheegay inuu magaaladaas ku soo khatimay booqasho uu xusay inuu ugu kuur-galayay hannaanka ay gobollada dalka uga hawl-gasho wasaaraddiisu.
“Waxaan maanta(shalay) magaaladda Gabiley aanu ku soo gabo-gabeynayaa booqasho aan aniga iyo wefti Wasaaradda ka socday aanu ku tagnay lixdii gobol ee hore iyo Gabiley. Waxaanu u kuur-galaynay in xafiisyadda gobollada ee Wasaaraddu ay yihiin qaar lagu shaqeyn karayo marka laga eego dhinacyadda xafiisyadda, qalabeynta iyo dayactirkaba waxa ila socday Injineer qiimeynayay xafiisyadda dayactirka u baahan ee wasaaradda iyo kuwa aan u baahnayn,”ayuu yidhi Wasiirka oo ka hadlayay shir saxaafadeed uu ku qabtay Magaaladda Gabiley isagoo xidhan Tuute ciidan.
Wasiir Maxamed Aw Daahir, waxa uu sheegay in laba bilood gudihii ay dhisayaan dhammaan xafiisyadooda gobollada ee dib u habaynta u baahan iyo kuwa in la deyr loo sameeyo doonayaba.
Ma Jirto wax raali-gelin ah oo Wasiirku ka bixiyay lebiskiisa cusub oo sawirkiisu hadheeyay mareegaha wararka ee internet-ka iyo baraha adeegyadda bulshadda.